Globle Media: सत्यको कसीमा, तथ्यको खोजी ! नुवाकोटका पालिका उपप्रमुखहरुको प्रमुखमा दाबी, कसका के एजेन्डा ?
नुवाकोटका पालिका उपप्रमुखहरुको प्रमुखमा दाबी, कसका के एजेन्डा ?
ग्लोबल संवाददाता शनिबार, चैत १२, २०७८
घलेभञ्ज्याङ (नुवाकोट) । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा गाउँ/सहरमा चुनावी सरगर्मी पनि बढ्दै गएको छ । राजनीतिक दलहरूले चुनाव केन्द्रित कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइरहेका छन् । स्थानीय तहको नयाँ नेतृत्वमा को आउला भनेर अड्कबाजीसमेत हुन थालेको छ ।
२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा नेतृत्वमा पुरुषकै दबदबा थियो । संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछिको पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा महिला पछाडि परे–पारिए । संविधानले प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला अनिवार्य गरे पनि अधिकांश पालिकामा उपप्रमुख महिला बने । उपप्रमुख महिलाका लागि कोटा जस्तै बनाइयो ।
वर्षौंदेखि राजनीति गर्दै आए पनि उपप्रमुखमा थन्काइएका महिलाहरू यस पटकको निर्वाचनमा भने नेतृत्व लिन तम्तयार देखिएका छन् । यसको तयारीमा समेत जुटेका छन् । उपप्रमुख भए पनि ५ वर्षे कार्यकालको अनुभव बटुलेका कारण नेतृत्व तहमै रहेर सरकार सञ्चालन गर्न सकिने आत्मविश्वास उनीहरूमा उच्च देखिएको छ ।
भौगोलिक दृष्टिकोणले नेपालको राजधानी काठमाडौंसँग सीमा जोडिएको नुवाकोट बत्ति मुनिको अँध्यारो भने जस्तै छ । यो जिल्लामा दुई नगरपालिकासहित १२ स्थानीय तह छन् । यसअघिका निर्वाचनमा प्रमुखमा सबै पुरुष र उपप्रमुखमा महिला । जिल्लाका बेलकोटगढी नगरपालिकामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) की कविता ढुंगाना, विदुर नगरपालिकामा नेकपा (एमाले) की गीताकुमारी ढकालले जित्नुभएको थियो ।
पञ्चकन्या, तादी, किस्पाङ, शिवपुरी, सूर्यगढी, म्यागङ, दुप्चेश्वरमा कांग्रेसतर्फका उम्मेदवारले जितेका थिए । तारकेश्वर, लिखु एमाले र ककनी गाउँपालिका माओवादी केन्द्र विजयी बनेको थियो । पहिलो कार्यकाल व्यतित गरिसक्नुभएका पालिका उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरु आगामी वैशाख ३० गतेको निर्वाचनका लागि अध्यक्षको लागि गृहकार्यमा हुनुहुन्छ । ग्लोबल मिडियाले तपाईं अध्यक्षमा उठ्नुहुन्छ कि हुन्न, उम्मेदवार बनेमा के छन् मुख्य एजेन्डा भनेर सोधेको छ । प्रस्तुत छ उहाँहरुको भनाइ जस्ताको तस्तै :
उपप्रमुख, बेलकोटगढी नगरपालिका
- मेयरमा उठ्नका लागि म व्यक्तिगत तयारी लागिरहेको छु । तर पार्टीभित्र उम्मेदवार कसलाई बनाउने र को बन्ने भन्ने विषयमा छलफल बाँकी रहेकोले धेरै भन्न मिल्दैन
यदि म मेयरको उम्मेदवार बन्न पाएको खण्डमा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा जोड दिने एजेन्डा रहनेछ । ५ वर्षको बीचमा उपमेयर भएर काम गर्दा यहाँका स्थानीयको आवश्यकता के हो र समस्या के छन् भन्ने जानकारी पाएँ । यस विषयमा विकासको आधार बनाउने काम गर्‍यौं । सिस्टम बसाल्यौं । कानुन निर्माणदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनका कुरा गर्‍यौं । ती कुरालाई अब कसरी अगाडि बनाउने भन्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई प्राथमिकता दिन्छौं । पहिलो कार्यकालमा नगरपालिकाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएकोले अब त्यसमा रहन्न, अब गुणस्तरीय सेवातर्फ ध्यान दिनुछ ।
उपप्रमुख, विदुर नगरपालिका
- आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने योजना छ । पार्टीले टिकट दिने/नदिने कुरा पनि हुन्छ । उम्मेदवारको विषयमा छलफल चलिसकेको छैन । मलाई टिकट दिएमा समृद्ध विदुर नगरपालिका बनाउने एजेन्डा हुन्छ । उपप्रमुख भएर काम गरियो । यो कस्तो नगरपालिका हो, भूगोल कस्तो छ भन्ने पहिचान भयो । मलाई लागेको यो नगरपालिकामा अब पूर्वाधार विकासभन्दा आर्थिक र सामाजिक विकासलाई जोड दिनुपर्छ ।
सिता पराजुली खड्का
उपाध्यक्ष, पञ्चकन्या गाउँपालिका
- अध्यक्षका लागि तयारी गर्दैछु । तर, पार्टीभित्र उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने छलफल पनि बाँकी नै छ । भोलि उम्मेदवार बनेको खण्डमा पञ्चकन्यालाई समृद्ध बनाउनका लागि विकासका पूर्वाधर निर्माणलाई निरन्तरता दिनेछ । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिका समस्या पहिचान गर्ने र त्यसअनुसार योजना बनाएर अगाडि लैजानुपर्नेछ । खासमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति अभाव रहेकोले त्यस्तै फूलफिल गराउने र शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन जोड दिनेलगायत समग्र विकासमा मेरो प्राथमिकता रहन्छ ।
तारादेवी रिमाल (अधिकारी)
उपाध्यक्ष, तारकेश्वर गाउँपालिका
- पाँच वर्षको सिकाइ भयो । धेरै काम गरियो । आगामी कार्यकालका लागि जग बनाउने काम भयो । हामी पपुलर भयौं । पार्टीले पक्कै पनि स्वीकार्ने छ । अबको निर्वाचनका लागि अध्यक्षमा मेरो दाबेदारी रहन्छ । पार्टीमा मैले कुरा राखिसकेको छु ।
चुनावमा एजेन्डाको हिसाबले भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टी गराउने, त्यस्तै दलित, जनजातिका बस्ती बस्तीमा योजना पुर्‍याएका छौं । उनीहरुका लागि अब आर्थिक विकासका काम गर्ने । मुख्य त गाउँपालिकाको आर्थिक पक्षलाई सबल बनाउने मेरो योजना रहनेछ ।
उपाध्यक्ष, दुप्चेश्वर गाउँपालिका
- अध्यक्षको उम्मेदवार बन्नका लागि क्राइटएरिया नपुगेको केही छैन । ५ वर्ष काम गरेको अनुभव छ । तर म पार्टी निर्णय, सल्लाह र सुझावअनुसार चल्ने व्यक्ति हुँ । यदि पार्टीले अध्यक्षको टिकट दियो भने चुनाव लड्छु । जित्छु पनि ।
मैले नेतृत्व पाएँ भने भौतिक निर्माण मात्र विकास होइन, मानव विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छु । मानव संशाधन विकासपछि भौतिक सँगसँगै आउँछ भन्ने मेरो बुझाइ छ । सुशासनयुक्त मानव संशाधन विकास गरेर भौतिक पूर्वाधार विकास गरेमा दीगो विकास हुन्छ भन्ने मान्यता छ ।
उपाध्यक्ष, ककनी गाउँपालिका
- हामी राजनीतिक व्यक्ति हौं । पार्टीमा छलफल नभई यही हुन्छौं वा उम्मेदवार बन्छौं भन्न सकिँदैन । अध्यक्षमा आकांक्षा र दाबी रहन्छ । तर पार्टीभित्र छलफलबाट जसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने निष्कर्ष निस्किन्छ । त्यसलाई स्वीकार्नै पर्छ ।
यदि मलाई पार्टीले टिकट दिएको खण्डमा विगतका वर्षहरुमा सुरु गरेका कामहरुलाई पूर्णता दिने एजेन्डा हुन्छ । अर्कोकुरा नेपालको केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंसँग जोडिएको जिल्ला ककनी गाउँपालिका पर्यटकीय सम्भावना भएकोले यसलाई धेरैभन्दा धेरै पर्यटक भित्र्याउने योजना बनाउनुपर्छ र यहाँको आर्थिक विकासलाई टेवा दिनुपर्छ भन्ने छ ।
शान्ति लामा गुरुङ
उपाध्यक्ष, म्यागङ गाउँपालिका
- आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि म अध्यक्षको दाबेदार हुँ । मैले टिकट पाएँमा गाउँपालिकालाई सिस्टममा लैजाने र पालिकावासीको हितका लागि कृषि, पर्यटन र यातायातमा पालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने मेरो योजना छ ।
मन्जु बुढाथोकी ढकाल
उपाध्यक्ष, सूर्यगढी गाउँपालिका
- अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने तयारी हुँदैछ । भनौं कोसिस जारी नै छ । जो आए पनि पार्टी र पालिकालाई अगाडि बढाउनुपर्छ । पहिलो त, सधैं मै मात्र हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । पालो दिने कुरा छ । मलाई पार्टीले रुचाएरमात्रै भएन, जनताले रुचाउनुपर्‍यो । म जनताको पसिना खाना आएको होइन । दुखी जनताको सुखदुखमा साथ दिन आएकी हुँ । मलाई पार्टीले टिकट दिएमा जितेर देखाइदिन्छु । पदमा बस्ने, कुर्सीमा बस्ने कुरामात्र होइन यहाँका जनता हाँसीखुसी देख्न पाउँ । उहाँहरुको आज्ञाकारी बन्नेछु । सूर्यगढी गाउँपालिकालाई नमुना गाउँपालिका बनाउने आँट र हिम्मत छ ।
उपाध्यक्ष, शिवपुरी गाउँपालिका
- अघिल्लो निर्वाचनबाट झन्डै ९० प्रतिशत महिला उपप्रमुख/उपाध्यक्ष बने । अब सबै पार्टीले महिलालाई प्रमुख पद दिनुपर्छ । मैले पनि उपाध्यक्ष भएर ५ वर्षको अनुभव संगालेको छु । अब अध्यक्षमा उठ्ने तयारीमा छु । पार्टीले विश्वास गरेर टिकट दिएमा उदाहरणीय काम गरेर देखाउनेछु । यसअघिको अनुभवका आधारमा म सक्षम छु, नेतृत्व गर्न सक्ने छु ।
यदि मलाई टिकट प्राप्त भएमा र जितेमा पालिकामा विवादितरहित ढंगले सबैलाई मिलाएर लैजान्छु । पूर्वाधार विकासतर्फ हामीले पूर्णता दिन नसकेका भ्यूटावर, रंगशालालाई सम्पन्न गर्नेछौं । विकास भनेको पूर्वाधारमात्रै होइन । बाटो खन्नु मात्रै होइन । नागरिकको आत्मनिर्भरता पनि हो । यहाँका लक्षित समुदाय महिला, दलित, जनजातिको आत्मनिर्भरता सँगै पहिले राहत नपाएका भूकम्पीडित राहत दिलाएर घर बनाइदिनेछु । कृषि क्रान्ति कसरी गर्न सकिन्छ र स्वेदशमै रोजगारी र स्वरोजगारको व्यवस्था गर्नेछौं ।
उपाध्यक्ष, तादी गाउँपालिका
- चुनाव तयारीमा भूमिका खेलीरहेको छु । निर्वाचनको बेला जनतामा जान्छु । मेरो भूमिकालाई आधार मानेर पार्टीको टिकट दिनेछ । पार्टीको विधि पद्धति र जनताको चाहनाअनुसार मेरो उम्मेदवारी हुन्छ । यदि मलाई पार्टीले अध्यक्षको उम्मेदवार बनायो भने गाउँपालिका विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी र कृषि क्षेत्रको विकास र गुणस्तरीयताका लागि प्राथमिकता दिनेछु । त्यस्तै तादी गाउँपालिकाभरी हामीले सडक निर्माण गरिसकेका छौं । त्यसलाई पिच, ढलान गरेर बलियो बनाउनुछ । त्यसो गरेर यातायात सेवा तादी गाउँपालिकामा सबैतिर सहज पहुँच पुर्‍याउने योजना रहनेछ ।
उपाध्यक्ष, लिखु गाउँपालिका
- आगामी निर्वाचनमा अध्यक्षमा दाबी रहन्छ । तर पार्टीको विधान र नीतिअनुसार चल्नुपर्ने भएकोले अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको टिकट कुन पाइन्छ त्यो केही समय पर्खनु पर्नेछ । जनतामाझ रहेर पाँच वर्ष समय बिताइँदैछ । म उम्मेदवार बनेको खण्डमा यहाँको भूगोलको अवस्था र समस्या भएका क्षेत्रगत हिसाबले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । खानेपानी समस्या भएका ठाउँमा त्यही रुपमा योजना अगाडि बढाउनुपर्ने छ भने स्वास्थ्य समस्या हुन नदिन नयाँ योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
शिक्षालाई कसरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने । आवश्यक कार्यविधि बनाउने जस्ता विषय पनि अघि बढाउनुपर्नेछ । त्यस्तै महिला, दलित, आदिवासी जनजातिलगायत लक्षित वर्गलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेछ । गाउँ गाउँमा विद्यमान बेरोजगारका समस्यालाई हल गर्ने योजना र कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नेलगायत चुनावी एजेन्डा रहनेछन् ।
मायादेवी घले न्यौपाने
उपाध्यक्ष, किस्पाङ गाउँपालिका
- अहिलेसम्म पार्टीभित्र उम्मेदवारको तयारी छलफल छैन । भित्रभित्रै भएमा मलाई थाहा छैन । पार्टीले अध्यक्षको उम्मेदवारको टिकट दिएमा पछाडि हट्ने छैन ।
म नेतृत्वमा आएमा पालिकामा आएका योजना सदुपयोग गर्नुछु । पहिले उपाध्यक्ष रहँदाको कार्यकाल सिकाइमात्रै भयो । यसलाई धेरै अनुभवको रुपमा लिएको छ । यो सिकाइलाई लिएर अगाडि अगाडि बढ्ने छु । पालिकामा विकास निर्माणदेखि सबै क्षेत्र पछाडि परेकोले यी विषयहरुमा मेरो कोसिस रहने छ । यहाँ विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या छ । त्यस्तै अरु पालिकाको तुलनामा किस्पाङमा पूर्वाधार निर्माण कम भएकोले यसलाई पनि अगाडि बढाउने योजना रहनेछ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत १२, २०७८, १३:०९:००